Igumbi leendwendwe kwinqaba enqabileyo e-Allier
Inqaba sinombuki zindwendwe onguViolet BELVILLA
UViolet BELVILLA unezimvo eziyi-113 zezinye iindawo.
Yiza uchithe ubusuku kwinqaba enkulu! Le ndlu ikhethekileyo ibekwe kwinqaba ukusuka kwinkulungwane ye-16, ebekwe eChâteau-sur-Allier. Indlu inegumbi lokuhlala elinendawo yokulala kwaye ilungele iholide kunye neqabane lakho.I-estate inabela ngaphezu kweehektare ezi-8 zehlathi elineegadi kunye nomlambo. Unokonwabela ipiknikhi kumda womlambo. Kufuphi nomlambo okwi-2 km, unokuhamba ngephenyane okanye uqubhe ngokulula kwindawo yendalo. Ilali ephakathi e-Apremont yindawo entle yokutyelela, ukuba uthanda izakhiwo zakudala. IBourgues kunye necathedral yayo entle ikumgama wemizuzu engama-50. Ihlathi laseTronçais lokuhamba lihamba ngemizuzu eli-15 kuphela. Ikhaya libekwe kumgangatho ophantsi, kufuphi ne-chapel yesakhiwo senkulungwane ye-16. Ubuncinci ukuhlala ubusuku obubini, ungasebenzisa ikhitshi yangasese kwi studio. Isidlo sakusasa sinikezelwa kwinqaba kwaye izilwanyana ezi-2 zivumelekile ngaphandle kweendleko, njengoko kunjalo indawo yokupaka kunye ne-parasols.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ipaseji, Ikhitshi (iketile yombane, umpheki, umatshini wekofu, ioveni, imicrowave, isitya sokuhlamba izitya, ifriji), Igumbi lokuhlala/ibhedi (ibhedi ephindwe kabini, itafile yokutyela, indawo yomlilo, indawo yokuhlala), igumbi lokuhlambela (ibhafu yokuhlambela, isitya sokuhlambela , yangasese))
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-113 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Umbuki zindwendwe ngu- Violet BELVILLA
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Château-sur-Allier